10 Uninzi Fascinating Ukuqeqesha Stations Kwi-Spain | Gcina A Isitimela
ekhaya > Uloliwe eSpain > 10 Uninzi Fascinating Ukuqeqesha Stations Kwi-Spain
10 Uninzi Fascinating Ukuqeqesha Stations Kwi-Spain
Uhambo loLoliwe, Uloliwe eSpain
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 19/06/2020)
Kukho inani lezikhululo zikaloliwe umdla kunye esebenzayo in Spain. Uya kufumana isantya esiphezulu, umgama medium, zengingqi, ombaxa hotel-Uloliwe ukuhamba kulo lonke ilizwe. Ukususela Izikhululo ezinkulu mihla abantu ezincinane engqongwe uhlobo, zezi 10 of Ukuqeqesha ipetroli ezininzi 'Umdla Spain kaThixo.
Barcelona, Speyin (Nemithi Train Station)
Esi sikhululo sanamhlanje sesinye esona sikhululo sikaloliwe esixakekileyo e-Barcelona. Yeyona kwisikhululo sikaloliwe siphambili zombini kazwelonke neyamazwe ngamazwe uqhagamshelo uloliwe. Esi sikhululo mkhulu kakuhle kwaye ibekwe ngaphakathi kwesixeko. Oku kusetyenziswa zombini bakule yaye abakhenkethi kwaye uya ukuxhumana ngezininzi kwizikhululo zikaloliwe lonke Spain.
Esi sikhululo yeyona inkulu e Madrid kwaye sele iminyaka emininzi. Yi station elihle and one of the most Fascinating Train Stations, izindlu Kuyashisa igadi kunye nehobe engcwele amahle ngaphakathi. on EyoKwindla 11, 2004, ngosuku ngoku eyaziwa eSpeyin 11-M, 191 abantu ababulewe kuthotho Iraq. Ke kwenzeka abazeleyo oololiwe ezine apha kwesi sikhululo kwaye ekufutshane.
Santa Justa isikhululo wesithathu-ephithizela Spain, zinetotali kumaqonga elinambini. Igama layo emva omnye abangcwele ozithandayo Seville kaThixo (udade Santa Rufina). Esi sakhiwo ise kwinxalenye Mpuma kombindi wedolophu Seville kaThixo. Kwingabula kunye noyilo sicocekile umzekelo izicwangciso lempucuko sixeko ngayo 1991.
Kaaronda Station Railway
Kaaronda kuthiwa yenye yeedolophu intle ku Spain. Le ukhetho Spanish amangalisayo Train ipetroli kubonisa lo, yaye ngokuqinisekileyo kufuneka-ukubona. Isikhululo yakhiwa emva 1892, kunjalo, kokuba iye yahlaziywa, ngokubalulekileyo igcinwe kule minyaka. Isikhululo usenayo Indian look "Anglo" okanye colonial nakuba. Uphahla weenkuni fringed ixhaswa kwiintsika zentsimbi axholiweyo nakumathafa iqonga osecaleni.
Esi sikhululo ibekwe kwisixeko esihle endala noZamora. Le yenye kwizikhululo zikaloliwe idumileyo eSpeyin ngenxa yobuhle bayo apho kungenxa nakubugcisa zommandla zemveli, kunye rooves isileyiti, amatye ashlar kunye arch esembindini enkulu osesihlalweni. Esi sikhululo lidume kuba ukufaneleka ngayo kwi Ruta de la Plata njenge uqhagamshelwano indawo.
Esi sikhululo ibekwe kwisixeko Zamora e Castile uLeon kwaye kucingelwa ukuba yenye yezona Train ipetroli ubangel eyake. ukwakhiwa kwayo kwafuneka kuvingcwa 1929 yaye ekugqibeleni yagqitywa 1958. It has a ovusa Renaissance iphefumlelwe ezinye iinkcukacha kukhunjuzwa isimbo kade yesiGothic. Ngokwenene ukuphefumla-ukuthatha.
Esi sikhululo sikaloliwe anokufunyanwa kwidolophu San Sebastian, indawo enhle umnikelo zombini ulwandle Amazing kunye nemibono intaba. Esi sikhululo yi ndanditsaleleka ngokokwayo njengoko yekhenopi egubungele amaqonga yayiyilwe nguGustave Eiffel ngubani na lo mntu mnye kakhulu owadala Eiffel Tower e France.
Oku kukhetha lama 'Umdla Train ipetroli ingafunyanwa kwi kumda ophakathi Spain ne Fransi . Kuye kwavulwa 1928 kwaye owaziwa ngelika "Titanic of the Mountains."Lakhiwa sandise urhwebo phakathi kwala mazwe mabini, kodwa emva kokuba azilungiswa kwaye iye ishiywe ukususela 1970. Esi sikhululo esiwa ababambana namhlanje. Abakhenkethi abakwaziyo ukubona ufana indlela grand ngayo ngemini yayo. abakhenkethi Okuninzi Spanish baye batyelela isayithi ukususela 2013. Ngaphezu inani labantu wakha watyelela isikhululo gama kwaba evulekile.
Le isikhululo sikaloliwe iphambili kwisixeko Valencia. Yakhiwa 1917 waza waba uphawu izakhiwo modernist European. It is a isakhiwo enkulu ikloko enkulu kunye Umfanekiso yokhozi embindini, kuzo ezinye izinto ezininzi emele isikhululo namhlanje. Oku kukhetha amangalisayo Train ipetroli kananjalo ingqalelo isakhiwo of Interest Cultural.
Esi sikhululo ibekwe inxalenye engentla Algeciras kunye kwiikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwizibuko ngenxa imfuneko yembali oko kwakuthetha ukuba kwakufuneka ukuba aphume uluhlu lweentlobo Gibraltar ngetoni-100 shaka. This train is used by people who would like to visit the Rock of Gibraltar. kuqala Kuye kwavulwa 1982 kwaye usenalo jonga endala-esikolweni uzive kuyo.
Nangona kukho inani kubo ezisebenzayo apho ku Spain namhlanje, zezi 10 kwizikhululo zikaloliwe kakhulu umdla Spain ukuba kutyelela. zokuhamba Train i inxalenye enkulu izithuthi zikawonke wonke inkqubo kweli lizwe kwaye siqhuba kakuhle kuyo yonke ibhodi. Kukho intaphane uhambo oluhle njengo adventures phezu-ebusuku Ongofanelwe ngololiwe kwaye kubalulekile ngoxa wakho ukuba asebenzise bakwaloliwe xa undwendwela Spain.
Fumana amatikiti zibhetele engambi eYurophu Gcina A Isitimela, Ithath ababini 3 minutes now to book a train ticket on Gcina i Train. ukuba kakhulu 'Umdla Train ipetroli e Spain, Hlawula usebenzisa zonke iindlela intlawulo ethandwayo kubandakanywa, ikhadi lebhanki letyala kwaye i-paypal.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-fascinating-train-stations-spain%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela
europeantravel oololiwe Isikhululo sikaloliwe Travel indawo yokuhamba
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy, Qeqesha uhambo ePortugal, Uloliwe eSpain, Uloliwe eSweden, Uloliwe eSwitzerland, Iingcebiso zokuhamba, Travel Europe